डा. गोविन्द केसी आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै आफ्नो नागरिक अधिकार हनन भएको तर्क पेश गरे
डा. गोविन्द केसी आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै आफ्नो नागरिक अधिकार हनन भएको तर्क पेश गरे
सर्वोच्चमा बहस,माइतीघरमा नाराबाजी
साझा अनलाईन २०७४ पौष २६ गते मा प्रकाशित 166 पटक पढिएको
काठमाडौं,पुस २६ – अदालतको अवहेलनामा सम्बन्धी डा. गोविन्द केसीविरुद्धको मुद्दामा बहस जारी छ । विहान ११ बजेबाट शुरु भएको इजलासमा डा. गोविन्द केसीले आफ्ना बयान राखेका छन् । इजलासमै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट र माफिया भएको बताएका छन् । डा. केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा बहस भइरहेको छ ।
बयान राख्ने क्रममा केसीले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै आफ्नो नागरिक अधिकार हनन भएको तर्क पेश गरे । उनले बहसमा भने,‘अदालतको कदर गर्छु तर न्याय विक्री गर्न पाइदैन , यस्ता व्यक्ति विरुद्ध म जहिले पनि लड्छु बहसमा आफ्ना कुरा राख्दै डा. केसीले भने ।
उनले भने, ‘गोपाल पराजुली माफिया र भ्रष्ट हुन् ।बहसका क्रममा डा केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गरेका छन् । डा केसीले आफूले गल्ती गरेको भए पाँच वर्ष पनि जेल बस्न तयार रहेको बताए । ’सर्वोच्चमा बहस भइरहँदा नजिकै माइतीघर मण्डलामा भने डा. केसीलाई रिहा गर्न माग गर्दै नाराबाजी भइरहेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन् ।